Ququzelela ibandla lakho ukuba liqalise - Sikunye
Ququzelela ibandla lakho ukuba liqaliseIvo Kittel2021-03-08T15:54:05+02:00
Ququzelela ibandla lakho ukuba liqalise
Siyakholwa ukuba wonke umntu unenxaxheba emandla ekufanele ayidlale ekubhalweni kwebali lekamva lo Mzantsi Afrika. Sisebenza kunye sinako ukwenza umahluko omkhulu kwimpilo zeentsapho nabantwana abancinci.
Ukuququzelela ibandla lakho ukuba liqalise ukukhonza iintsapho kubandakanya indidi ezintathu zabantu: Iinkokheli zebandla, amarhamente neeNtshatsheli zeSikunye (ekuzizo iinkokheli zephulo lweeNtsuku eziliWaka zokuQala). Zikhethele wena ukuba kokuphi okufanele wena ukuze uthathe amanyathelo alandelayo.
I-Sikunye ikholelwa ukuba ukuze ibandla likhonze iintsapho kakuhle, kufanele ukuba iinkokheli zikwazi oko kananjalo zibe yinxalenye yelo phulo. Oku kubangela ukuba iphulo nemihlangano yeeNtsuku eziliWaka zokuQala abeyinxalenye yezinto ezenziwa libandla lonke. Asikholelwa ukuba umfundisi okanye iinkokheli yebandla ifanele ukwenza zonke izinto, kodwa kufanele afumane ithuba elikhethekileyo noxanduva emayilidlale. Hlola apha indlela efanele ukuhanjwa yinkokheli.
Wonke umntu unendima nenxaxheba anokuyidlala ekwakheni nokuxhasa iintsapho. Naphi na apho ukhoyo, unako ukwenza umahluko ngokuba yinxalenye yephulo lokunika abantwana isiseko esomeleleyo sokuqala ubomi. Hlola apha oko onako ukukwenza.
Ukuba unomdla nomnqweno wokuba ibandla lakho lidlale inxaxheba ekuxhaseni iintsapho kananjalo ukhokhele iqela labantu ekwenzeni oko, zama ukuba yiNtshatsheli ye Sikunye. Intshatsheli isebenza neenkokheli yebandla, amavolontiya ukuze ibone kukhula inkathalo yoluntu oluxhasa abazali babantwana abancinci.